UKUHLALA KWINDAWO ENCINCI: IIMFIHLO EZI-5 ZOGCINO LWAMAKHAYA AMANCINCI - LUNGELELANISA KWAYE UCOCE
Ukuhlala kwindawo encinci: Iimfihlo ezi-5 zoGcino lwaMakhaya amaNcinci
Ke uyathanda ubugcisa kodwa ungacingi ukuba unendawo eyaneleyo ekhayeni lakho yokugcina izinto eziyimfuneko? Nokuba awunalo lonke igumbi elinikezelwe kubugcisa, oko akuthethi ukuba ngekhe wenze indawo yokuzonwabisa kunye nemisebenzi ekuzisela uvuyo lokuyila. Ezi mfihlelo zintlanu zezinye zeengcinga zethu esizithandayo esizibonileyo kwiwebhu ngendlela yokulingene ngakumbi ubugcisa ekhayeni lakho nakubomi!
Ewe ayisiyiyo nje intsilelo yendawo enokuba ngumqobo ekwenzeni ubugcisa kwisithuba esincinci, igcina konke kuhleliwe, nako (njengoko sisazi, ubumenemene bubonakala ngathi buvelisa ngakumbi kwindawo encinci).
1. Yenza nkulu indawo yokugcina onayo
Siyayithanda umbono wokusebenzisa iihanger zempahla kwindawo yokugcina izinto zobugcisa. Iingcinga zokuGcina ubuGcisa Uluhlu lwetoni yeendlela apho iihanger zinokunceda ekuququzeleleni, ukusuka ekuxhonyweni kweeribhoni, ukwahlula ilaphu nokunye. Ke vavanya indawo yokugcina onayo ekhayeni lakho (nokuba iyimpahla okanye ikhabethe lelinen) kwaye ubone ukuba ikhona na indlela yokuyila ukuze ucofe indawo engaphezulu kula mabala.
2. Ileyibhile, ileyibhile, ileyibhile
Yabona, xa ungenalo igumbi elinikezelweyo okanye indawo yezixhobo zakho zobugcisa, kufuneka uzinikezele ngakumbi kubugcisa bokubhala iilebheli. Iibhokisi zokuphawula, ukuloba iilebheli, ukulebhelisha yonke into. Ngokukodwa xa uxuba izinto zakho zobugcisa kunye nezinye izinto zokugcina. Oku akuyi kwenza lula ukuba ufumane izinto zakho zobugcisa, uya kuba nakho ukukhumbula into onayo kwaye uyisebenzise ngakumbi! Siye sabona ezinye izimvo zelebheli ezikrelekrele kwigumbi lobugcisa Uyilo olungaqhelekanga .
→ Ukuzilungiselela: Ukujongana neCape Space
3. Nikezela yonke ifenitshala kwinjongo yezobugcisa
Ukuba awunalo igumbi elipheleleyo lokunikezela ngobugcisa kodwa ucinga ukuba ungasindisa yonke ifanitshala, uya kuba ngcono ngayo! Uyakonwabela ukubuyela kule fenitshala (nokuba incinci njengetafile esecaleni enedrowa) kwaye uzive ukhuthazekile xa uyivula. Kwaye yenze ibe sisiqwenga sefenitshala onokuyivala xa ufuna ukuba ne-clutter yobugcisa.
Inombolo yengelosi eyi-1234 enentsingiselo
Zine. Ukubuyiswa kweendawo ezimangalisayo zokubonelela ngobugcisa
Njengoko kubonwe kule foto kwi Imagazini yeHGTV , kuye kwafuneka ukuba ngamanye amaxesha ujonge amabala angaqhelekanga ukugcina izinto. Emva komnyango, iishelfu ngaphezulu komnyango, phantsi kwebhedi - ukuba uhlala kwikhaya elincinci cinga ezo zikhethekileyo kodwa zihlala zinendawo yokugcina izinto zobugcisa bakho.
→ Ngaba unendawo yokusebenzela ezinikezelweyo?
5. Fumana iinkcukacha kunye nombutho wakho
Nokuba unegumbi elipheleleyo, isiqwenga sefenitshala okanye uxuba ukugcinwa kwakho kobugcisa kunye nezinye izinto kwiindawo zekhaya lakho elincinci, ufuna ukufumana inkcukacha ezintle kunye neemfuno zakho zobugcisa ukwandisa indawo kwaye yenze isebenze ukuze ukwazi ukuyisebenzisa. Ke izixhobo ezizodwa kunye neeprojekthi ze-DIY zohlobo lwezinto zobugcisa ozisebenzisa kakhulu, nokuba yiribhoni, iimakishi, ilaphu okanye nangaphezulu. Isahluli sedrawer, izikhongozeli ezincinci - ayinamsebenzi nokuba yintoni, thatha ixesha lokufumana inkcukacha. Sibonile ezinye izimvo Ukugcina izindlu kakuhle .
→ Thenga okanye i-DIY: ubuGcisa kunye nokuGcina ukuGcinwa koBugcisa
Zeziphi ezona zinto ziluncedo ekugcinweni kobugcisa bezithuba ezincinci okhe wazisebenzisa okanye wazifumana? Yabelana ngezimvo zingezantsi!
UAdrienne uthanda uyilo, uyilo, iikati, intsomi kunye nokubukela i-Star Trek. Kule minyaka ili-10 idlulileyo ubizwa ngokuba yikhaya: iveni, indawo eyayisedolophini edolophini kwidolophu encinci yaseTexas kunye nendawo yokuhlala studio esasinamahemuhemu okuba babekhe bangabanini bakaWillie Nelson.
intsingiselo yokubona i-333
Ngaphambi nasemva: Idesika yeSikolo esiDala ifumana iMakeover
Yiya Kukhulu, Hlala Ekhaya: Thenga i-T-Shirt yethu kunye neNkxaso yeziBonelelo eziBini eziNceda kwiNgxaki
Amakhandlela angama-7 angaphantsi kweedola ezili-15 aLunge ngokwenene
Ngokukrakra, Kutheni ungasebenzisi i-Hand-Held Shower Head?
Eli gcisa linokuLungisa isihombiso esiJongeka ngokuchanekileyo njengeNdlu yakho
Yifumane ngokuNcinci: IKhabhinethi yeFayile yeFlati yeFlati yeVintage
Iprojekti ye-DIY Upholstery: Uyenza Njani eyakho indlela yokubetha ilaphu (okanye iWelting)
Ukucoca kunye nokugcina isitovu seRhasi
Nantsi indlela Ingcali ye-HGTV eguqule ngayo uLwakhiwo lweGumbi lokuHlala ukuze ifake usapho lwe-8
Ukusetyenziswa oku-8 okumangalisayo kweti yeTi yoMthi ekhaya
Nika iSipho seBoze (kodwa hayi ngaphambi koZhushing Up iibhotile zakho)
Uphononongo lubonisa ukuba iikati zaziqonda ngokwazo amagama azo, ke ngokuqinisekileyo azikuhoyi
Uyisusa njani intsalela encamathelayo kwiMarble
Ikhaya lePhupha le-HGTV 2019 lelona lixabisa kakhulu
lithetha ntoni inani leengelosi ezingama-333
Ingelosi inombolo 1122 enentsingiselo
Intsingiselo yenani leengelosi ezingama-444
ukubona i1111 ngalo lonke ixesha
ukubaluleka kokomoya kwama-333
Intsingiselo yenani leengelosi ezili-111
yintoni inani leengelosi ezingama-444